Zishaqise inkantolo izelamani zichaza ngokubulala umfowabo omncane | News24
Zishaqise inkantolo izelamani zichaza ngokubulala umfowabo omncane
Johannesburg - Izelamani ezimbili zidalule okushaqisayo enkantolo yaseTsisa Falls eduzane naseQumbu, e-Eastern Cape, ngoLwesithathu, zichaza ngokuhlinza umfowabo omncane ukuze zizosebenzisa izicubu zakhe zomzimba negazi ukwenza umuthi.
Izicubu negazi kwakuzosetshenziselwa ukwenza umuthi wokulapha omunye wabasolwa onesifo sokuwa.
UMawethu, 22, noLuvo Gwayi, 26, babhekene necala lokubulala ngokubandakanyeka esigamekweni sokubulala uBuhle Gwayi, 9, owatholwa ngoLwesithathu olwedlule ebulewe.
OLUNYE UDABA:Lisenkantolo elombulali odayise izicubu zomzimba
Kwakubikwe ukuthi uBuhle udukile ngalo lelo sonto.
Isigameko senzeka eMdeni Village, eduzane naseShawbury eQumbu.
UMawethu, esebhokisini lofakazi efaka isicelo sebheyili, ukuqinisekisile ukuthi babandakanyeka kanjani kulesi sigameko nokuthi sasihlelwe kahle.
Balivumile icala ngoLwesithathu.
"Yebo, samuhlinza umfowethu ngoba sasifuna izinyawo, isibindi, ikhanda kanye negazi lakhe ukuthaka umuthi wokwelapha uLuvo," kusho uMawethu etshela inkantolo, evele yathuka yoma ngemuva kokuzwa le ncazelo.
Icala lihlehliselwe umhlaka-20 Septhemba.